Jaceyl lagalo - Youmo
Att vara kär - somaliska
Waxaa laga yaabaa iney kala duwaanaato
Jaceyl la galo dareema kala duwan ayey yeelan kartaa marar badan. Inta badan si ka duwan ayey noqotaa marka aad muda ku jirtay jaceyl, oo ka duwan marka aad ku hor leedahay.
Jaceylku wuxuu lahaan karaa waxyaaba lama filaan ah
Waxaa laga yaabaa inaad jaceyl la gashid qof aad taqaano, ama qof aadan aqoonin. Dareenka aad buu u ficnaan karaa, xitaa haddii aadan wada kulmin ama wada joogin. Waxaa laga yaaba inaad jaceyl kula jirto dad badan isla wakhtigoo.
Sideen ku muujin karaa jaceylkeyga?
Waa kuwaan talooyinka qaar. Xulo shey kuugu fiican. Haa sameynin wax qariib kuugu ah ama aan kuu ficneyn.
Sideen ku ogaan karaa inuu qof i jeclaaday?
Dadka qaar si cad ayey u muujiyaan marka ey qof jecel yihiin. Dadka qaar iyaga isku reeba dareenka. Tusaalooyinka qaar oo aad ka dareemi karto haddii uu qofka kaa helo:
Jaceyl nasiib daran
Sida qaalibka ah, wey adag tahay haddii qofka aad jeceshahay uusan adiga ku jeclayn. Mararka qaar jaceylka waa lagu dhibboodaa. Wuxuu leeyahay khibarado iyo dareema badan.
MawduucFilim: Sidee ayaa qof loola kulmaa?
Maxaa la sameeyaa runtii si aad qof aad jeceshay ula kulanto? Halkan ayaad ka heli ‎doontaa talooyin, ay dadka yaryari u soo direen UMO.‎
MawduucTobobarka galmada iyo HBTQ